Izinga computerization namuhla kudinga ushintsho ukuze "paperless" ukuphathwa ehhovisi. Kusekelwe idokhumenti ngogesi, okuyinto ngokungafani kuya bendabuko, libhekene eziningi izakhiwo ezintsha kanye nezici. Kuze kube manje, incazelo eyodwa lesi simanga alikho emthethweni futhi emhlabeni yesayensi yeRussia.
Umqondo "idokhumenti ngogesi" yavela njengoba ekuseni njengoba 1970. Ngakho-ke saqala ngokuthi "imibhalo efundekayo emshinini." engavamile wabo ukuthi kumele wadala ngosizo ubuchwepheshe bama-computer futhi alungele ukucutshungulwa ikhompyutha. Kulokhu, imininingwane edingekayo zenziwa ngokuqinile ngokuhambisana nenqubo amiselwe wonke amadokhumenti.
Electronic idokhumenti - uyinto ulwazi, ehlanganisa izingxenye ezimbili saziso: 1) imininingwane (igama, ulwazi mayelana nombhali, isikhathi, indawo odabuka, njll) kanye yogesi digital; 2) engxenyeni eyinhloko okuqukethwe ehlanganisa umbhalo, ulwazi graphic zezinombolo kusetshenzwe njengoba iyunithi.
Incwadi electronic zasayindwa ofaka isignesha ofanelekayo electronic, okwenza kube okulingana iphepha ngemvume ngesandla sakhe. Ulwazi uvezwa kuyo digital (electronic) ifomu. idatha Eqonda usebenzisa amakhompyutha bangadlulisela ulwazi ezokuxhumana amanethiwekhi, inqubo - ezinhlelweni zezokwazisa. Uma kudingeka, idokhumenti kungathatha ifomu kokubukwa esikrinini bese ephepheni.
Electronic idokhumenti - umjikelezo wokuphila electronic amadokhumenti e ibhizinisi (inhlangano, inkampani) ukuzithola, ukushintsha isimo (sivunyiwe, sidluliselwe, e, uphawu, ivaliwe, njll) ukwesulwa ingobo yomlando. idokhumenti ezinjalo ngezinye izikhathi ibizwa ngokuthi i-«ukuhamba komsebenzi», okuyinto ephawula ukunyakaza amadokhumenti uma ukusakaza eyodwa imisebenzi ngabanye ngaphakathi inqubo ethize ibhizinisi. Yonke electronic mbhalo yokuphathwa uhlelo lubandakanya amasofutiwe ukuthi udinga ukuhlela kanye nokugcina lolu hlobo ukuphila-umjikelezo kwemibhalo.
idokhumenti elekthronikhi ukuhamba komsebenzi kwezindlu kusekelwe kuyo kunezimo eziningana ezisivunayo phezu bendabuko. Zenza abasebenzi wenhlangano ukulawula endaweni hhayi kuphela yabo yomsebenzi, kodwa yonke inqubo. Sebenzisa ingobo yomlando elekthronikhi zibelula kuka ephepheni. , Ukunciphisa isikhathi ukudlula ukubambisana yayo nasekubulaleni idokhumenti zingatholakala kwamaminithi ambalwa. Ngokuvamile, kuba ukonga ngaphezulu kuka ephepheni. Kukhona impela eningi idokhumenti ngogesi ukuphathwa software ( "Isisusa", "E1 Ewufrathe", "DocsVision", "1c: Document". Nabanye).
Okwamanje, kukhona Shade isipiliyoni angaphandle ukulawulwa ubudlelwane emkhakheni kwemibhalo electronic ngokuya ngokomthetho. ERussia, inkinga wesi yalezi ubudlelwane akuzange wathola izinqumo zomthetho, nakuba kwenziwa imizamo Ukwamukelwa komthetho (2005). Ukwamukelwa komthetho ngalolu hlobo iphepha - omunye izinkomba ezibalulekile wesi zomthetho.
Bhalisa inkampani: imibhalo ukuvula Ltd.